Sidee Calan Loogu Sameeya Youtube-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Barashada si loo shakhsiyeeyo kanaalkayaga YouTube waa mid aad muhiim u ah haddii aan rabno inaan ku dhex korno barnaamijkan fiidiyowga ah ee caanka ah. Haddii aad ka fekereyso inaad naftaada u hibeyso gebi ahaanba abuurka markaa waa lagama maarmaan inaad ku bilowdo inaad yeelato kanaal si fiican loo qaabeeyey.
Maqaalkeenna oo ku saabsan Maanta waxaan ku tusi doonnaa talooyin wax ku ool ah oo kaa caawin doona inaad u sameysato banner kaamil ah kanaalkaaga YouTube. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira aalado kala duwan oo kaa caawin kara inaad naqshadeyso bannerka ugu fiican, halkanna waxaan ku xusi doonnaa qaar ka mid ah.
Calanku muxuu yahay?
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay tahay inaan ogaano ka hor barashada sida loo sameeyo boor Youtube. Markii aan ka hadlayno ereyga "banner" waxaan ula jeednaa nooc ka mid ah sawir caan ah oo u adeegaya in lagu garto kanaal cayiman.
Calanka waxaa lagu gartaa, waxyaabo kale, cabirkeeda cajiibka ah. Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu kala duwan yahay marka la barbar dhigo sawirka astaanta ama astaanta astaanta u ah oo badanaa ka yar kana saxsan. Calanku wuxuu ku yaalaa dusha sare ee kanaalkayaga.
Banner si fiican loo qaabeeyey Waxay noqon kartaa xarigga ugufiican ee lagu qabto macaamiisha cusub ee kanaalkeena. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la barto sida loo abuuro mid asal ah, cajiib ah oo xiiso leh indhaha dadweynaha. Sidan oo kale waxaan ku gaari doonnaa meeleyn wanaagsan calaamadeena.
Dhamaanteen waan yeelan karnaa calankeena
Waxaa jira kuwa tixgeliya in sameynta banner ay tahay hawl kaliya loogu talagalay shirkadaha ganacsigaSi kastaba ha noqotee, kulligeen waan yeelan karnaa mid. Dadku sidoo kale waxay yeelan karaan sumad shaqsiyeed waana inaan waqti galino si aan ugu guuleysano koritaanka mustaqbalka fog iyo kan fog.
Haddii aad ku leedahay kanaal shaqsiyeed gudaha YouTube, waa muhiim inaad bilowdo mid kasta oo ka mid ah walxaha oo tilmaamaya astaantaada, tusaale ahaan:
Iyo dabcan, banner
Sida loo sameeyo bannerka ugu fiican
Markaad abuureyso calanka ugu wanaagsan YouTube, waxaa lagama maarmaan ah inaad tixgeliso dhowr dhinac oo muhiim ah, oo ay ku jiraan mala-awaalkeena iyo hal-abuurnimadeena.. Ha iloobin in sameynta banner ay tahay arrin nashqadeysan, marka hal-abuurnimadu waa lama huraan.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la doorto barnaamij naqshad wanaagsan ama codsi. Nasiib wanaag websaydhka waxaan ka helnaa waxyaabo kale oo badan, qaarkoodna gebi ahaanba waa bilaash. Isku day dooro barnaamij ku siinaya arrimo diyaarsan, halka aad kaliya wax ka beddeli karto faahfaahinta yaryar.
Waa muhiim iska ilaali cabirka calankeena loogu talagalay Youtube. Xusuusnow inay kuxirantahay aaladda ay ku aragto inay tahay sida uu calamadaadu u ekaan doonto. Waxa kale oo fure ah in la ogaado sida loo isticmaalo nooca midabka, farta iyo cabbirka sawirrada aad ku ridi doonto boodhkaaga.
Miyaad yareyn kartaa ereyada qeexaya kanaalkaaga. Marka dadku waxay yeelan doonaan dulmar guud oo kooban oo ku saabsan mawduucyada aad ku horumariso mawduucaaga wayna iska qori karaan haddii ay dareemaan soo jiidasho.
Tallaabooyinka lagu rakibo calanka Youtube
Samee guji ku saabsan sawirkaaga sawirka
Degmooyinka qaybta nashqadeynta oo soo raro bannerka aad ugu talagashay kanaalkaaga.
1 Calanku muxuu yahay?
2 Sida loo sameeyo bannerka ugu fiican
3 Tallaabooyinka lagu rakibo calanka Youtube
Sidee loo soo degsadaa fiidiyow Youtube ah PowerPoint?